के काँग्रेसको साथ बिना चुनावी मैदानमा जालान् त माधव नेपाल र प्रचण्ड ? काँग्रेसले देला साथ ? – Karnalikhabar
के काँग्रेसको साथ बिना चुनावी मैदानमा जालान् त माधव नेपाल र प्रचण्ड ? काँग्रेसले देला साथ ?
काठमाडौं – सत्तारुढ गठबन्धन आगामी चुनावसम्म सँगै जाने भने पनि चुनाव प्रचार अभियान भने छुट्टैछुट्टै गरेका छन् । गठनबन्धनमा आवद्ध दलले चुनावमा सँगै जाने भनेर आधिकारीक रुपमा घोषणा नै नगरे पनि सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्मको लागि निर्माण भएको हो ।
गठबन्धनसहित चुनावमा जानेबारे दलहरूले छुट्टाछ्ट्टै छलफल गरेर मात्र गठबन्धनको बैठकबाट निर्णय लिने भनेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख तथा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र चुनाव एक्लै लड्ने वा गठबन्धनसहित जाने भन्नेमा फरक–फरक मत छ । आवश्यक परेपछि पार्टीले निर्णय लिने भन्दै यो विषय अहिलेलाई थाती राखेको छ । गठबन्धनका अन्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले गठबन्धनलाई चुनावसम्मै निरन्तरता दिन चाहेका छन् । यी दलले आगामी तीन तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा पदाधिकारीले दुईथरी धारणा राख्दै आए पनि पार्टीले निर्णय गरेको छैन । दलहरूले एक्लाएक्लै चुनावी अभियान भने गरिरहेका छन् । गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले २९ फागुनदेखि देशैभर एक महिने चुनाव लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरी ‘घरघर जाऔं, कांग्रेस जिताऔँ’ भन्ने नाराको साथ अभियान सुरु गरेको हो । अभियानको लागि कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाएको छ ।
प्रतिनिधिलाई वडा र टोलसम्मै पुगेर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरिएको कारणबारे प्रष्ट्याउनुको साथै संविधान रक्षाको लागि कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकाको सन्दर्भमा जनतालाई प्रष्ट पार्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति लगाउने गरी चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रमको लागि जिल्ला पसेको छ । समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने मुल नारासहित माओवादीले चुनावमा भेला, प्रशिक्षण, संगठन विस्तार, सदस्यता वितरणलगायतका अभियान गरिरहेको छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टीको चुनावी अभियान प्रभावकारी ढंगले अघि बढीरहेको बताए । ‘अहिले स्थानीयस्तरमा प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको छ । पार्टीले एक्लै चुनाव लक्षित प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गरिरहेको छ । अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय भयो भने मिलेर प्रचार गरौंला,’ प्रमुख सचेतक गुरुङले न्युज कारखानासँग भने ।
जनता समाजवादी पार्टीले पनि बुधबारदेखि चुनावी प्रचार अभियान सुरु गरेको छ । नेता मनिष सुमनका अनुसार पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलले आफूले रोजेका जिल्लामा प्रचारमा खटिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादी पनि चुनाव लक्षित कार्यक्रममा केन्द्रित भएको छ । एसले यहि चैतको दोस्रो हप्तादेखि देशैभर अभियानमा निस्किने गरी तयारी भइरहेको नेता जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अघिल्लो - ‘हामी यहाँ छौं’ भन्नेलाई कांग्रेसले उद्धार गर्‍यो : महामन्त्री थापा
अब एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्छ ढोका बन्द गरेका छैनौँ – वर्षमान - पछिल्लो